Awood-baahinta: Aalad cusub oo lagu maal-galiyo degmooyinka - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Awood-baahinta: Mashruuc cusub oo lagu maal-galiyo degmooyinka
Awood-baahinta: Mashruuc cusub oo lagu maal-galiyo degmooyinka
Nidaamka ay dejiyeen Wasiirka Maaliyadda Louis Motaze wuxuu ku saleysan yahay habka tooska ah ee udubdhexaadka ah ee ku xiran 5 bilyan CFA francs, bil kasta oo ku jira xisaabta kaliya ee miisaaniyadda. Lacagtaas waxaa lagu heli karaa koontada qarsoon ee Beac.
Maaddaama ay kor u kaceen kharashka ammaanka, caqabadaha lacag caddaan ah sannadihii la soo dhaafay ayaa looma oggola Public Cameroon ee Wasaaradda Maaliyadda si ay ula qabsadaan taariikhda iyo in guud ahaanteed, xaddiga biloodle ah senti dheeraad ah la wadaago (ACC) ee bulshooyinka Territorial baahsan (CTD).
Sidaas daraaddeed, in wajahayo qaab marxalado ah, Hantidhowrka bixisay in mudnaanta degmooyinka ka-faa'iideystayaal ah oo tiro yar. Sidaa awgeed dib u dhac ah ee suuqa kala iibsiga dhabta ah ee khayraadka. Laakiin waxan oo dhan waa (qaar) taariikhda ancienne.tard ee kala iibsiga ee CAC. Louis Paul Motaze aasaasay tan iyo January 2019, nidaamka cusub ee degmooyinka maalgelinta dhex akownka qof saddexaad furay in buugaagta ee Bankiga Dhexe (BEAC), ka go'an in ay maal-baahinta.
Sida laga soo xigtay khubaro ah Wasaaradda Cameroon ee Maaliyadda, qalab this ku salaysan yahay hab ah debit automatic ah 5 bilyan oo euro oo faran CFA bil kasta on Maaliyadda Account Single ah. qalliin u ogolaanaya gobolka u leedahay in 15 bilyan oo faran CFA dhamaadka quarter kasta si ay ugu bixiyaan centimes dheeraad ah la wadaago ", kuwaas oo celcelis ahaan afartii biloodba waxaa lagu sheegay, waa inta u dhaxaysa 17 iyo 20 bilyan oo faran CFA."
Sidaa daraadeed, sharaxaad ka bixisay shaqaale sare oo ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda, "horay u lahaan jirtey bilyan XNUM, waa u fududahay Maaliyadda in ay abaabulaan qadarka dheeraadka ah si ay u bixiyaan dhamaan CTD hal goor." Caddeyn in nidaamkan cusub ee maalgelinta degmooyinka ay ka shaqeeyaan, rubucii afaraad ee CAC 15 ayaa la siiyay dhammaystirkii saddexda bilood ee ugu horreeya sanadkan, waxaan baranaynaa.
Wasaaradda Maaliyadda, waxaa hubaal ah in, iyadoo la adeegsanayo nidaamkan CTDs la siin doono si joogto ah saddexdii biloodba mar, taas oo awood u siin doonta inay si wanaagsan u qorsheeyaan fulinta miisaaniyadooda. Lacag bixinta CAC-yada lagu ballanqaaday nidaamkan, khayraadka kale ee CTD ee ka soo jeeda qoondaynta guud iyo miisaaniyadaha kala duwan ee miisaaniyadda ayaa noqon doona mawduuca bixinta qarannimada sida dhammaan kharashyada kale ee miisaaniyadda ee Gobolka.
Sidee si sahlan looga helaa sharciyada cusub ee filimada jinsiyada Ingiriiska (cusbooneysiiyay: April 2019)
Linda Hunt, oo ah mid ka mid ah jilayaasha ugu qurxoon uguna jilicsan, waxay u dabaaldegeysaa sannad-guurada 74th!